Fikarohana momba ny firaisana Ny tranga fanalefahana ny Andrew Jackson | John Kerry & Rachel Jackson | Teresa Heinz - Fikarohana Reincarnation
Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Andrew Jackson | John Kerry & Rachel Jackson | Teresa Heinz
Andrew Jackson | Raharaha John Kerry Nosoratan'i: Kevin Ryerson
Rachel Jackson | Raharaha Teresa Heinz Nosoratan'i Walter Semkiw, MD
Notohanana tamin'ny: Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
I Kevin Ryerson no namorona ny hypothesis voalohany John Kerry dia ny vatana vaovao indray Andrew Jackson, ny filoha fahafito Etazonia. Tamin'ny fotoam-pivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin, Ahtun Re, mpitari-dàlana nampitain'i Kevin, izay manana firaketana an-tsoratra momba ny fanaovana lalao mandrindra ny fiainany, dia nanaiky fa i Kerry no reincarnation an'i Jackson.
Andrew Jackson dia teraka tao 1767, ao amin'ny faritry ny sisintany anelanelan'i North sy South Carolina, ary maty tao 1845. John Kerry dia teraka tamin'ny 98 taona taty aoriana, tao 1943. Maromaro ny fitoviana eo amin'ny fiainana sy ny fikarakarana an'i Jackson sy Kerry
Fanolontena an-tsitrapo ho an'ny asa miaramila amin'ny fiandohan'ny fiainana & fanehoana herimpo sy fitarihana amin'ny fanompoana miaramila.
Andrew Jackson dia teraka tao 1767 ary rehefa nosoniavina ny volana Jolay 4, 1776, i Andrew, dia sivy taona dia i Andrew. Efatra taona taty aoriana, tamin'ny taona 13, i Andrew dia nanolo-tena hanompo ao amin'ny Revolisiona Revolisiona ho iraka. Taorian'ny ady dia nandalina lalàna i Andrew ary nanomboka asa niavaka ho mpampanoa lalàna ary taty aoriana dia mpitsara azy.
Nanohy nandray anjara tamin'ny raharaha miaramila i Jackson ary tany 1802 dia voafidy Jeneraly jeneralin'ny milisy Tennessee, sokajy izay nomena azy taty aoriana tao amin'ny tafika mahazatra. Jackson dia tsaroana indrindra tamin'ny asany miaramila tao amin'ny Ady any New Orleans, tamin'ny Ady 1812. Noho ny fitarihany sy ny herim-po tao amin'io ady io, tsy ela i Jackson dia lasa mahery fo teo amin'ny toetran'ny Amerikanina.
John Kerry koa dia nanolo-tena hanao fanompoana ho an'ny fiadiana tamin'ny fiandohan'ny fiainany. Vao avy nahazo diplaoma tamin’ny Yale izy dia nanolo-tena hanompo any Vietnam i Kerry. Nandritra ny fitsangany faharoa tamin'ny asany, dia nanolo-tena an-tsitrapo i Kerry hitondrana sambo Swift, miendrika renirano deltas, iray amin'ireo asa tena mampidi-doza indrindra. Nandritra ny asany tamin'ny tafika, nomena an'i Star Star i Silverry, Star Bronze niaraka tamin'ny Combat V ary Tratra Lato telo i Kerry. Taorian'ny ady dia niforona i Kerry Vietnam Veterans of America ary taty aoriana dia lasa Filohan'ny komity voafidy ao amin'ny Senate momba ny raharaha POW / MIA. Tao anatin'io fahaiza-manao io, izay niasa ho an'ny voafonja ady ary ireo tsy hita tamin'ny asany, dia nanjary mpinamana i Kerry. John McCain.
Fiarahan'ny baiko tsy manaja / fanoherana raha toa ka tsy azo inoana ny baiko
Naneho ny tsy fankatoavan'ny fahefana i Andrew Jackson rehefa nahatsapa fa tsy marina ny toeran'ny manam-pahefana. Ity toetra ity dia aseho amin'ireto ohatra manaraka ireto:
Fony i Andrew dia niasa tamin'ny ady revolisionera ho mpandefa iraka, tamin'ny faha-13 taonany, dia nosamborin'ny anglisy nandritra ny fotoana maromaro izy. Rehefa nitaky ny hamirapiratan'ny Andrew ny kiraron'ilay manamboninahitra ny manamboninahitra anglisy dia nandà i Andrew. Namaly ilay manamboninahitra britanika tamin'ny nikapohany ny tanany tamin'ny sabatra, izay niafara tamin'ny famonoana lalina ny tanan'i Andrew.
Nandritra ny Ady tamin'ny 1812, ny jeneraly jeneraly Andrew Jackson dia nasaina nitondra ny miaramila Tennessee tany Natchez, Mississippi. Rehefa tonga izy ireo dia nilazana i Jackson fa tsy nilaina ny olony ary tokony noroahiny ny antokony miaramila. Nihevitra i Jackson fa diso ny baiko ary notoheriny izany. Nentiny nody tany Tennessee kosa ny tafiny. Tao amin'ity diabe ity dia nahazo ny anaram-bosotra hoe "Old Hickory" i Jackson. Noho ny fifehezana henjana notazonina tamin'ny diabe, dia hitan'ny olony fa “henjana toa ny hickory” i Jackson.
John Kerry koa dia naneho ny toetran'ny fanoherana ny fananganana tafika, rehefa nieritreritra izy fa handray fanapahan-kevitra ratsy ny mpitondra miaramila, na rehefa tsy natao ho tombontsoan'ny lehilahy ao aminy akory aza izy.
Ohatra iray amin'izany ny fanompoana azy amin'ny maha komandà Swift Boat azy. Nisy fotoana nanafika ny sambok'i Kerry. Tsy niverimberina nitifitra ny fahavalo ny sambony, izay fomba fanao mahazatra, i Kerry kosa dia nandidy ny hitodihana mivantana any amoron-tsiraka eo akaikin'ny afo, ary nasainy nopetahana ny sambony. Miaramila fahavalo saika handroaka mpandefa balafomanga B-40 dia gaga tamin'ny fomba fiasa, tsy nanam-potoana handroahana ny balafomanga ary niverina tany anaty ala. Nitsambikina avy tao anaty sambo i Kerry ary nanenjika ilay miaramila tany anaty ala, namono azy ary ho fanarahan-dia dia namono fahavalo sivy hafa ny miaramilany. Ho an'ity hetsika ity dia nomena an'i Kerry ny Star kintana.
Taorian'ny fitsangany faharoa tamin'ny asany tany Vietnam, dia nanatsoaka hevitra i Kerry fa fahadisoana ny ady. Lasa mpitondra tenin'ny Vietnam Veterans Against War. Amin'ity andraikitra ity, tamin'ny faha-27 taonany, dia nijoro ho vavolombelona teo anatrehan'ny Komitin'ny Fifandraisan'ny Raharaham-bahiny Senatera izy tamin'ny volana aprily 1971, izay nanambarany hoe:
Amin'ny fahazoana ny fiainana taloha an'i John Kerry amin'ny maha Andrew Jackson azy, ny fiampangana fa "nivalampidina" i Kerry tamin'ny Ady Vietnam dia azo fantarina tsara kokoa. Nandritra ny androm-piainana roa, Jackson / Kerry dia naneho fahavononantena mialoha sy mafana hanompo ny fireneny na dia miaramila aza. Nandritra ny androm-piainana roa dia nasehony koa ny toetra tsy fanarahana an-jambany sy tsy fisainana. Rehefa Jackson | Nanapa-kevitra i Kerry fa tsy mety ny mandeha ny baiko, nanohitra ny fahefan'ny tafika izy ary nanao izay hitany fa zavatra tsara tokony hatao amin'ny toe-javatra voalaza. Tsy toetran'ny "flip flopping" io, fa kosa maneho ny faharanitan-tsaina, fanavakavahana ary fahasahiana hijoro amin'ny fahamarinana.
Ny toetran'ny Optimism
I Andrew Jackson dia nalaza noho ny fahatokianany, toetrany niarahan'i John Kerry.
Niditra an-tsehatra tamin'ny raharaham-pirenena tamin'ny fotoana nanafihan'i Etazonia ny Tany
Andrew Jackson dia mpitarika miaramila izay nanampy ny nandroaka ny Anglisy, izay nanafika ny US tamin'ny Ady 1812 ary nandoro ny Trano Fotsy amin'ny 1814.
John Kerry dia nihazakazaka ho filoham-pirenena amerikana tamin'ny fotoana nanimbana ny World Trade Center sy ny fanafihana ny Pentagon dia mampiseho ny fotoana voalohany nanafihan'ny US ny taniny tamin'ny alàlan'ny Ady 1812.
Nandalina lalàna & lasa mpampanoa lalàna tamin'ny fahazazanao
Taorian'ny Ady Revolisiona, dia nianatra lalàna i Andrew Jackson ary nekena tamin'ny Tennessee Bar tao 1787, tamin'izy 20 taona. Tao anatin'ny herintaona dia lasa mpisolovava mpampanoa lalàna tao amin'ny Fitsarana Tampony tao Nashville, Tennessee. Niasa ho mpitsara tao amin'ny Fitsarana Tampony any Tennessee i Jackson tao anatin'ny enin-taona.
John Kerry dia nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'ny Lalànana tao Boston College tao 1976, roanjato taona taorian'ny nanoratana ny fanambarana momba ny fahaleovan-tena. Kerry, fitaratry ny lalan'i Jackson, dia lasa mpisolovava mpampanoa lalàna ho Mpanolontsaina Distrika Voalohany ao amin'ny Middlesex County, Massachusetts. Amin'ity anjara andraikitra ity dia nanampy ny hametraka ilay mpanao heloka bevava voalamina roa tao Massachusetts ao ambadiky ny bara izy.
Ny karatra fiarahamiasa ara-tsosialy
Andrew Jackson dia nihazakazaka ho solontena amerikana tany 1796 ary lasa Kongresista voalohany avy any Tennessee, fanjakana izay vao avy nanaiky ny Vondrona. Jackson dia voafidy avy eo ho senatera amerikana avy any Tennessee.
John Kerry dia nihazakazaka ho an'ny solontenan'i Etazonia avy any Massachusetts, na dia tsy nahomby tamin'ny fifidianana aza. Taty aoriana dia niasa ho Governemanta Lt. ho amin'izany fanjakana izany ary voafidy ho senatera amerikana avy any Massachusetts.
Nandray anjara tamin'ny Fifidianana filoham-pirenena taorian'ny "fifidianana nangalarina"
Tamin'ny fifidianana 1824, dia nihazakazaka ho filohan'ny Etazonia i Andrew Jackson ary nahazo ny safidim-bahoaka, saingy tsy ampy ny vatany Electoral College hahazoana fandresena ny filoham-pirenena. Ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy nanapa-kevitra tao amin'ny Lapan'ny solontena. Rahoviana Henry Clay, izay fantatra fa namboarina indray tao amin'ny persona an'i John McCain, niandany tamin'i John Quincy Adams (zanakalahin'i John Adams), dia nandresy tamin'ny latsa-bato tamin'ny Antenimiera ary lasa Filoham-pirenena i Adams. Koa satria nandresy tamin'ny latsa-bato malaza i Jackson saingy resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nantsoin'ny mpanohana azy ny fifidianana 1824 hoe "Fifidianana nangalarina." Tamin'ny fifidianana 1828 dia resin'i Jackson i John Quincy Adams ary lasa filoha izy.
Tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2000 dia noheverina fa nandresy tamin'ny safidim-bahoaka i Al Gore, saingy resy tamin'ny fifidianana tao amin'ny Electoral College, toa ny nataon'i Andrew Jackson tamin'ny 1824. Amin'ity vokatra ity, miaraka amin'ny resabe momba ny latsa-bato any Florida, tamin'ny fifidianana tamin'ny 2000 ho "Fifidianana halatra." Raha nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana tamin'ny John 2004 i John Kerry dia ho naveriny indray ny fomba fiasa amin'ny maha filoha azy aorian'ny "Fifidianana nangalarina." Tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, tsy naverina ny lamina, satria tsy naharesy i Kerry.
Nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nampiditra ny zanak'ireo filoham-pirenena
Tamin'ny fifidianana 1824, i Andrew Jackson dia nihazakazaka nanohitra an'i John Quincy Adams, zanak'i John Adams, filoha faharoa an'ny Etazonia. Rehefa nandresy an'i Jackson i John Quincy tamin'ny fifidianana 1824, John Adams sy John Quincy Adams no ray sy zanany voalohany nanompo ho filohan'ny Etazonia. Niara-nihazakazaka nitady ny filoha nanohitra an'i John Quincy Adams tao amin'ny 1828 i Jackson avy eo ary nandresy.
Ny fifidianana George W. Bush tamin'ny taona 2000 dia naneho fanindroany fa ny zanakalahin'ny filoha dia lasa filoham-pirenena. Tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena tamin'ny 2004, John Kerry dia nifaninana tamin'i George W. Bush, toa an'i Andrew Jackson nanohitra an'i John Quincy Adams.
Fanambadiana ho an'ilay vehivavy mitovy
Vadin'i Andrew Jackson, Rachel Jackson, dia nohamafisin'i Ahtun Re fa teraka tamin'ny vatana hafa indray ho vadin'i John Kerry, Teresa Heinz.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana ara-batana eo amin'i Andrew Jackson sy John Kerry, ary koa ny an'i Rachel Jackson sy i Teresa Heinz.
Innate Past Life Talent: Araka ny voalaza etsy ambony, ny fahaizan'i Andrew Jackson sy ny lalan'ny asany dia naverina tamin'ny fiainana John Kerry.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Andrew sy Rachel Jackson tafangona indray ao amin'ny personas John John sy John Kerry sy Teresa Heinz. Andrew Jackson sy Henry Clay dia teo amin'ny sehatra politika mitovy, toa an'i John Kerry sy John McCain.